Ekpere nye Saint Jude Thaddeus maka okwu siri ike na enweghị olileanya. ?
Ekpere Saint Jude Thaddeus maka okwu siri ike ma nwekwa olileanya N’ime arịrịọ niile mmadụ nwere ike ịrịọ, enwere nsogbu siri ike karịa ndị ọzọ. Maka ndị a, e nwere ekpere dị ike nke a.
N'ebe a, ịgaghị arịọ maka ihe dị mfe ma ọ bụ nke na-abaghị uru, ya bụ, ekpere a bụ ihe pụrụ iche ịrịọ maka ihe agaghị ekwe omume dịka ọgwụgwọ ọrụ ebube, dịka ọmụmaatụ.
Okwu ikpe ahụ bụ ihe kachasịkarị, mana ị nwere ike ịrịọ maka ihe ọzọ.
N’ebe ndị mmadụ na-efu efu, ụmụaka ma ọ bụ ndị toro eto, San Judas Tadeo na-arịọ ka o gosi ha ụzọ ịlaghachi n’ụlọ.
Isi ihe bụ okwukwe nke ejiri ya mee.
Deschọsi ike ịhụ ọrụ ebube bụ ihe dịkarịsịrị njọ, ọtụtụ oge enwere ọnọdụ ndị dịka enweghị nchegharị, mana n'ọnọdụ ndị a, ekpere nwere ike bụrụ naanị isi udo na ntụkwasị obi anyị.
1 Ekpere Saint Judas Tadeo maka okwu ikpe siri ike ma na-achọsi ike Onye ọ bụ?
2 Ekpere Senti Jud Thaddeus maka okwu siri ike ma ju anya
3 Ekpere di ike?
4 Kedu mgbe m kwesịrị ikpe ekpere St. Jude Thaddeus?
Ekpere Saint Judas Tadeo maka okwu ikpe siri ike ma na-achọsi ike Onye ọ bụ?
Mara maka ịbụ onye na-enyere anyị aka n'ọnọdụ ebe o yiri ka ọ nweghị nsogbu ọ bụla. A kpọtụrụ ya n’ozi ọma dị na Baịbụl dịka otu n’ime ndị na-eso ụzọ iri na abụọ Jizọs.
N'ịbụ onye otu n’ime ndị ozi iri na abụọ ahụ, ọ nọ na Onyenwe anyị n’oge ahụ ọ nọ n’ụwa n’ụdị mmadụ ya.
Ọ na-agbaghakarị ya na Judas Iskarịọt, onye bụ onye nyefere Jizọs n’aka ndị Farisii.
Judas Tadeo enweghị ọtụtụ ozi gbara ọkpụrụkpụ na-agwa anyị ebe o si bịa, mana ihe a maara bụ ike ya inye ọrụ ebube enweghị ike.
A na-atụle onye nsọ kachasị ugboro ugboro taa, yabụ ọ dị ezigbo mkpa ịmatakwu gbasara akụkọ ya.
Ike ọrụ ebube ya bụ eziokwu na ọ na-arụ ọrụ dị ka onye etiti n'etiti anyị na Jizọs, n'ụzọ dị otu a ka ekwere na arịrịọ ndị a ga-esi dị mkpa karịa ocheeze nke elu igwe, maka nke a, a na-aza ha ọsọ ọsọ n'agbanyeghị ike ọ bụla siri ike ma ọ bụ sie ike ọrụ ebube a na-arịọ. n'ime ekpere.
Oh mma Apostle St. Jude! Ohu kwesịrị ntụkwasị obi na enyi Jizọs. Aha onye sabo raara nna gị ukwu n’anya n’aka ndị iro ya bụ ihe mere ọtụtụ ji chefuo gị. Mana Nzukọ-nsọ ​​na-asọpụrụ ma na-akpọku gị na ụwa niile dịka onye nchekwa nke ihe isi ike na enweghị olileanya.
Kpee ekpere maka m nke ahụ jọrọ njọ ma na-eme ihe maka ya, ana m arịọ gị, maka ohere pụrụ iche enyere gị. Nke iji nyere aka anya ma n’otu ntabi anya mgbe ọ fọrọ nke nta ka olileanya niile fuo.
Bata enyemaka m na nnukwu mkpa a.
Ka m wee nweta nkasi obi na enyemaka nke eluigwe na mkpa m niile, mkpagbu na ahụhụ, ọkachasị (mee ekpere ọ bụla pụrụ iche ebe a). Na ka O wee gọzie gị na gị na ndị a họpụtara ka ha ruo mgbe ebighị ebi.
M na - ekwe gị nkwa, Saint Saint dị ebube, icheta nnukwu ihu ọma a oge niile na agaghị m akwụsị ịsọpụrụ gị dịka onye nchebe pụrụ iche m ma sie ike ma mee ihe niile m nwere ike ime iji kwado ofufe gị.
Ọrịa na-enweghị njedebe dịka ọrịa kansa, ihe ọghọm ndị mmadụ, ndị mmadụ na-efu, nwude mmadụ, izu ohi na arịrịọ niile a na-eche na ha siri ike bụ ndị ekwesịrị ịgakwuru onye nsọ a.
Youkwesịrị ịjụ kpọmkwem ihe ịchọrọ inweta, maka nke a ị kwesịrị ịma ikpe ahụ nke ọma, anyị enweghị ike ịrịọ iji gwọọ mmadụ, ọ ka mma ikpe ekpere kpọmkwem, na-eji aha onye ahụ na aha ọrịa ahụ, dịka ọmụmaatụ .
Ọkachasị n’ihe na - akpata furu efu, n’ọnọdụ ndị ahụ ebe ndị mmadụ tụfuru okwukwe, ebe olileanya na-adịghị.
Oge ahụ bụ oge ike nke onye were ọrụ a nọ. Ọpụrụiche na ịnapụta ikike ikwere onye Saint na-enyere anyị aka ịkwado na ijide okwukwe ahụ.
Ekpere di ike?
Ihe na-ekpe ekpere Senti Jud Thaddeus maka okwu ndị siri ike na nkụda mmụọ siri ike bụ okwukwe nke esi eme ya.
Okwu Chineke na-akuziri anyị na ọ bụrụ na anyị arịọ Nna ka ọ kwere na ọ ga-enye anyị ọrụ ebube.
Yabụ na anyị nwere ike ịghọta na ọ bụ naanị ihe a chọrọ iji kwuo ya rụpụtara nsonaazụ. Rịọ n’enweghị okwukwe na anyị nwere ike ịtụkwasị obi n’obi na enyemaka Chineke bụ ikpe ekpere n’efu.
Anyị enweghị ike ịrịọ onye anyị na-ekweghị ka o nye anyị ihe anyị rịọrọ. Ihe a choro aghaghi ikwere site n'ihe di omimi.
Ezigbo okwukwe. Chineke, Onye Okike nke ihe niile, ka dị ike inyere anyị aka n’ihe niile anyị chọrọ, O nwekwara ndị nsọ Ya inyere anyị aka imezu ya, yabụ ịla azụ ikpe ekpere oge ọ bụla ịchọrọ ya.
Kedu mgbe m kwesịrị ikpe ekpere St. Jude Thaddeus?
You chọrọ ịma mgbe ekwesịrị ikpe ekpere a dị ike?
You nwere ike kpee ekpere nye St. Jude Thaddeus maka okwu ndị siri ike ma na-achọsi ike oge ọ bụla ịchọrọ.
Onye nsọ a dị ike na-anụ arịrịọ gị niile, maka na o zuola iji okwukwe na ọtụtụ okwukwe kwenyere na ya.
Can nwere ike ma kpee ekpere ụbọchị niile tupu ị lakpuo ụra ma ọ bụ ụbọchị ọ bụla iteta n'ụra.
Ọ bụrụ n’inwe oge, anyị na-akwado gị ka ị nweta oriọna ọcha n’inye San San Tadeo.